२० मिनेटको लागि गर्लफ्रेन्ड..., त्यो पनि जम्मा १५ रुपैयाँमा ! - Namaste Times
बिहिबार, चैत्र ०७, २०७५ | Saturday, April 14, 2018
२० मिनेटको लागि गर्लफ्रेन्ड…, त्यो पनि जम्मा १५ रुपैयाँमा !
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख ०१, २०७५ समय: ८:३०:४५
हामी सबैको जीवनमा केहि बन्ने लक्ष्य हुन्छ । कोहि डाक्टर बन्ने लक्ष्य राख्छन् त कोहि पाइलट त कोहि शिक्षक तर के तपाइँले कसैको गर्लफ्रेन्ड वा कसैको ब्याईफ्रेन्ड बन्ने लक्ष्य राख्छौं ? पक्कै पनि तपाईलाई यो प्रश्न अचम्म लाग्यो होला । किनकी चीनमा एउटा सपिंग कम्प्लेक्सले गर्लफ्रेन्डको जागिर दिएको छ । यसको मतलव जागिर खानेको कामनै कसैको गर्लफ्रेन्ड बन्नु पर्ने हुन्छ ।
भनिन्छ नि संसारमा सबै थोक किनेर पाइन्छ तर बाबु-आमा पाइन्न । हुन पनि हो अब हुँदा हुँदा गर्लफ्रेन्ड पनि किनेर नै पाइने भए पछी के को चिन्ता ? तपाइँ जति सुकै नराम्रो हुनुस् वा तपाइँसँग गर्लफ्रेन्ड नै छैन, एक्लै झ्याउ लागेको छ भने अब तपाइको लागि राम्री-राम्री शुन्दरी तपाइको अघि-पछी हुन्छन् ।
माथिका कुराहरुले तपाइले केहि कुरा बुझ्नुनै भयो होला अब भाडामा पनि गर्लफ्रेन्ड पाइन्छ । एउटा यस्तो जागिर जो तपाइँलाई थाहा छैन, तर प्रचलनमा छ । जुन ट्रेन्ड हाम्रै छिमेकी मुलुक चीनमा प्रचलनमा आएको हो । जहाँ भाडामा गर्लफ्रेन्ड लिएर सँगै हिड्न तथा नियामानुसार ति गर्लफ्रेन्डको प्रयोग गर्न पाइन्छ ।
रिपोर्टको अनुसार चीनको शहर हुआनमा एक शपिङ सेन्टरले १५ जना युवतीलाई भाडामा उपलब्ध गराएको छ । विटालिटी सिटी शपिङ कम्प्लेक्सको मुख्य गेटमा ति युवतीहरु पाइन्छन् । जसमध्य तपाइँलाई जुन राम्री लाग्छ, उसैलाई छान्न पाउनुहुन्छ, जसको लागि मात्र १५ रुपयाँ (नेपाली पैसामा रुपान्तर गर्दा) मात्र तिर्नु पर्ने हुन्छ । २० मिनेटको लागि तपाइँले गर्लफ्रेन्ड पाउनुहुन्छ र यदी २० मिनेट काटेमा मिनेट अनुसार पैसा तिरे पुग्छ ।
युवती भाडामा लिएपछि तपाइँले उनको साथ शपिङ, लन्च वा डिनर लिन सक्नु हुन्छ । यदी तपाइँ सपिंग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ र एक्लो हुनुहुन्छ भन्ने तपाइले उनै गर्लफ्रेन्डलाई लिएर जान सक्नुहुन्छ, जसले तपाइँले आग्रह गर्नुभएमा तपाइले किन्नु भएको सामान बोक्ने, तपाइँसँग गर्लफ्रेन्डले झैं व्यवहार गर्ने, सँगै हिड्ने तथा सपिङ मलमा खाजा/खाना/कफी खाने, तपाइँसँग फोटो खिच्ने लागायतको सेवा गर्नेछिन् ।
यस शपिङ सेन्टरले जनाए अनुसार यो पछिल्लो समयको सबैभन्दा ठूलो शपिङ ट्रेन्ड बन्नेछ । तर एउटा सर्त तपाइँको लागि खिन्न बनाउने खालको के छ भने तपाइँले भाडामा लिएर जानु भएको उक्त युवतीलाई तपाइले छुन भने पाउनुहुने छैन । … गज्जब छैन त चाइनिजहरुको व्यापार पोलिसी ?